Matte type Sweatproof ဖြစ်တဲ့အပြင် Foundation ကို Shade 40 တောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အလန်းစား Power Play Foundation! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Matte type Sweatproof ဖြစ်တဲ့အပြင် Foundation ကို Shade 40 တောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အလန်းစား Power Play Foundation!
အမျိုးသမီးထုကြီးသာမက Beauty Artists တွေရဲ့ ယုံကြည်အားပေးထောက်ခံမှုကို အရယူထားနိုင်တဲ့ Cover FX ကနေ မကြာသေးမီက Power Play Foundation ကို အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီ Foundation ရဲ့ အထူးခြားဆုံးနဲ့ အားအသာဆုံးအချက်တွေကတော့ Shade ပေါင်း ၄၀ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Sweatproof, Waterproof ဖြစ်တာကြောင့် Market ထဲရောက်ရောက်ချင်း သုံးစွဲသူတွေနှစ်ခြိုက်မှုကို အရယူထားနိုင်တဲ့ Foundation လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Liquid Foundaiton ဟာ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Weightless ဖြစ်တဲ့အပြင် Modern-matte full coverage ကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အနာအဆာများကို မှေးမှိန်စေပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာ အသားအရေဟာ ခြောက်သွေ့မွဲခြောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ Matte type look လေးကိုရရှိစေမှာပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနဲ့ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်များကို ခံနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တနေကုန်ခံပါတယ်။ အဆီ နဲ့ အနံ့ပါဝင်ဖော်စပ်ထားခြင်းမျိုး မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေ Sensitive ဖြစ်သူတွေနဲ့ Oily ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Environmental Protection ဖြစ်တဲ့အတွက် အသားအရေပျက်စီးလာမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပေါ့။
ရွေးခြယ်တဲ့အခါတိကျမှန်ကန်တဲ့ Foundation မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ရန်အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့အသားအရေဟာ ဘယ်လိုအရောင်ထဲမှာပါဝင်သလဲဆိုတာကို သိရှိစေဖို့ရန် P, N, G, G+ ဆိုပြီး ၄မျိုးခွဲထားပေးပါတယ်။ ပန်းရောင်သန်းတဲ့ အသားအရေအတွက် P, ပန်းရောင်နဲ့ ရွှေအိုရောင်သန်းတဲ့ အသားအရေအတွက် N , အဝါရောင်အသားအရေအတွက် G, အဝါရောင်ထက်ပိုမိုညိုတဲ့အသားအရေအတွက် G+ ဆိုပြီး ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။ Shade Range ကိုသိဖို့ရန်အတွက် Light 0-20, Medium 25-40, Medium Deep 50-85, Deep 90-125 ဆိုပြီးခွဲခြားပေးထားပါတယ်။ ဒီတော့ Perfect Shade ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရန်အတွက် အလွယ်တကူ တိကျမှန်ကန်စွာ ရွေးခြယ်နိုင်ပြီပေါ့။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Liquid Foundation Brush နဲ့ဖြစ်စေ Makeup Sponge နဲ့ဖြစ်စေ မျက်နှာအနှံ့ညီညာအောင် Blend လုပ်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Loose powder လေးအသုံးပြုပြီး မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးရုံပါပဲ။
Image Source : www.coverfx.com